Yoo vaayireesii koronaa ufi irratti argitan ‘hin rifatinaa gorsuma – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioYoo vaayireesii koronaa ufi irratti argitan ‘hin rifatinaa gorsuma
Yoo vaayireesii koronaa ufi irratti argitan ‘hin rifatinaa gorsuma
(voaafaanoromoo)-Vaayireessiin koronaa nama adduyaa miliyoona 1 kuma 500 caalaa irratti argan. Kuma dhibba hedduutti fayyee kuma kurnya hedduu galaafate.
Jajjabaachaa dhufee jennaan doktoralleen wal mari’atee amma maatiin walti deebi’e taatullee torbaan dhufu keessa doktora bira dhaqee ufi laalaa jedha. “Dhukkubicha caalaa rifaatuutti nama ajjeesa kanaafuu hin rifatinaan jedha,” jedhe Caalaan.
Dhiba kana namuu woma beekuun ufi irraa eega. Caalaan duraan dhiba dhibiillee qabaachuu baadha ammallee ”Waaqayyoodhumatti na eege” jedha.